काठमाण्डौं । चैत्र १६ । तपाई विदेशबाट फर्कनुभएको छ वा कोरोना सङ्क्रमित मुलुकबाट भर्खरै आउनुभएको छ ? तपाईलाई कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो कुनै लक्षण देखिएको छ ? यदि छ भने तपाई क्वारेन्टाइनमा बसीहाल्नुस् । तपाईले लापरवाही गरिरहनुभएको छ भने अब तपाईलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्न सक्नेछ । लुकीछिपी आफू पनि जोखिममा पर्नुभएको छ, घर परिवार, समाज र राष्ट्रकै विरुद्ध लागि रहनुभएको छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी जेल सजायसमेत गर्नसक्नेछ ।